वर्णन मिडिया पाटनउच्च अदालतमा आजपनि वेञ्च बहिस्कार दोषी को ? - वर्णन मिडिया
२२-भाद्र-२०७६ | ०४:०२:४९ pm
भाद्र २० गते शुक्रवार पाटन उच्च अदालतमा भएको बेञ्च वहिस्कार गर्ने घटना फेरी पनि दोहोरिएको छ । भाद्र २२ गतेको पेशीमा पनि मुख्य न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी र श्री लोहितचन्द्र शाहको संयुत्त इजलास तोकिएकोमा । लोहितचन्द्र शाह आजपनि बेञ्चमा बस्न मानेन् । स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै इजलाशमा उपस्थित नभएको खवर वर्णन मिडियाले पाएको छ ।
आजको पेशी सुचीमा अनन्तनाथ फुँयाल, निर्जला पौडेल र रविन खड्काको बैंकिंग कसुर सम्वन्धी मुद्धामा यि दुई न्यायाधशिको संयुक्त इजलाश तोकिएको थियो । आजपनि लोहितचन्द्र शाहले बिमारी भएको भन्दै बेञ्च बहिष्कार गरेर बाहिर निस्किएकाछन् ।
यो घटनाले पाटन उच्च अदालतमा समस्या सृजना गर्ने देखिन्छ । मुख्य न्यायाधशिले इजलास तोक्ने अन्य न्यायाधीशले अमुक अमुक संग बस्दिन भनेर भन्न सुहाउँने हो होइन ? यो बहसको बिषय बन्दै जाला छलफलको बिषय बन्दैजाला । तर यसरी व्यक्तिको सिनियरीटि र जुनियरपनलाई इसु बनाएर अदालतको काम कारवाहीमा अवरोध खडा गर्नुले सेवाग्राहीलाई नकारात्मक असर पर्नसक्छ ।
आजकै मुद्धा थुनुवाको सम्वन्धमा थियो । यो इजलाश नबसेको कारणले गर्दा कुनै जेल बाट छुट्नु पर्ने मानिसलाई थुनिएको रहेछ भने त्यसले देशलाई पाप लाग्छ । यो घटना सामान्य होइन । कुनै समयमा कोही नासु हुँदा कुनै नवप्रवेशी खरीदार रहेछ र खरीदार सिधै शाखा अधिकृत बनेमा उसले भनेको मान्दिन भन्ने हो भने देश कसरी चल्ला । यो सिनियर यो जुनियर भन्ने भाव राख्ने हो भने , स्वाभिमान स्वरुप राजनीनामा दिनु प¥यो होइन भने यसरी बेञ्च बहिस्कार गर्नु पक्कै पनि सोपानीक सिद्धान्त अनुसार गलत बिषय हो ।
न्यायपरिषदले तोकेर पठाएको मुख्य न्यायाधीशलाई मान्दिन, बर्षौ अगाडी उ मेरो अन्डरमा थियो भन्नु सायद गैह्र सान्दर्भिक हो की । कसैको छोरा प्रधानमन्त्री बावु खुशि हुने की म भन्दा माथि गयो भनेर वदलाको भाव राख्ने । यो विषयमा जो कोहीले सोच्नु पर्छ । उमेर कै कुरा गर्ने हो भने सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा भन्दा उमेरमा सिनियर न्यायाधीशहरु जिल्ला र पुनरावेदनमा कति छन् ? सवैले अमुकको मातहतमा बस्दिन भन्ने हो भने राजीनामा दिनु पर्‍यो होइन भने पदको सम्मान गर्नु प¥यो । मुख्यले भनेपछि मातहतले मान्नु नै ब्यूरोक्रेटिक मान्यता हो ।
यदि लोहित चन्द्रको स्वाभिमानमा ठुलै असर परेको हो भने भनसुन गरेर सरुवा लिनु पर्‍यो । अन्यथा अहिलेको सत्य के हो भने मुख्य न्यायाधशि नहकुल सुवेदी लोहित भन्दा माथिल्लो पदमा छन् । उनले तोकेको बेञ्चमा वस्दिन भन्न मिल्दैन । ठिकै छ भोलीबाट यदि मुख्य न्यायाधीशले बेञ्च आफुसंग नतोके पनि कहाँ को संग तोक्ने भन्ने अधिकार उनैसंग हुन्छ । वा भोली पनि आफैसंग तोकेर नियमित रुपमा बेञ्च बहिस्कार गर्न वाध्य पारिदिएमा न्यायाधीश हुनुको अर्थ नै के रहन्छ ? त्यसैले यो पाटनको बेञ्च बहिष्कार काण्डलाई अनौपचारिक औजार प्रयोग गरेर भएपनि प्रधानन्यायाधीशले सल्टाएमा राम्रो हुने देखिन्छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणः ‘नेपाल जानु पाकिस्तानको बाटो’